Miha miparitaka ihany… : vola vaovao sandoka 2 alina Ar, miisa 59 indray no sarona | NewsMada
Miha miparitaka ihany… : vola vaovao sandoka 2 alina Ar, miisa 59 indray no sarona
Vaony herinandro teo no nahatrarana vola sandoka amin’ny iray alina vaovao teny Anosibe, izao indray ity tany Sambava ity. Miha mipariataka ihany… Vola sandoka 20.000 Ar vaovao miisa 59 no saron’ny polisy tany Sambava taorian’ny fitarainana nataona mpivarotra iray avy any amin’ny kaominina Ambohimalaza, ny alarobia 2 aogositra teo.
Araka ny fanazavana azo, nisy tanora telo nividy sakafo tao amin’ny mpivarotra iray, nandritra ny fampisehoana nataona mpanakanto iray tany an-toerana. “Rehefa natambatra ny vola tokony no naloan’izy ireo, nahatratra 220.000 Ar. Nanome tokoa izy ireo, hay vola sandoka daholo ny nandoavan’izy ireo izany”, hoy ny fanazavana.
Voalaza fa tsy mahalala ary tsy mbola nahita maso akory ireo vola vaovao ny olona any ambanivohitra fa ny lazany fotsiny no henon’izy ireo amin’ny vola vaovao. Miparitaka ny feo fa somary ratsy endrika noho vola teo aloha izany ka nohararaotin’ireo olon-dratsy izany. “Teo am-pividianana entana tany Sambava tampon-tanàna ilay mpivarotra vao taitra fa tsy vola tena izy ireo teo am-pelantanany ka teo vao nikoropoka”, hoy ny kaomisera Tsara Nestor nanazava.
Tadidin’ilay mpivarotra ny endrik’ireo olona nitondra ireo vola ireo tao aminy ka tratran’ny polisy avy hatrany. Fantatra fa “commissionaire de vanille” sy ny mpitondra Bajaj ireo olona ireo. Tratra hatramin’ny fitaovana nampiasain’izy ireo nanaovana dika mitovy ireo vola ihany koa.
Nilaza ny kaomisera eto Sambava, Tsara Nestor fa efa ela ny nahenoana feo fa miparitaka eto Sambava sahady ny vola sandoka vaovao nefa tsy nisy iray volana akory ny nivoahany. Mbola eo am-panaovana fanadihadiana momba izany ihany, efa nisy iray hafa koa sarona avy any Lanjarivo Antalaha ary samy efa voasambotra ny tompon’antoka.
Araka ny fanazavana azo ihany, hararaotin’ny sasany ireo olona any ambanivohitra amin’ny fanaparitahana vola sandoka. Noho tsy fahampian’ny fampahafantarana tonga any amin’ny faritra indrindra ireo olona any ambanivolo, manararaotra ny olon-dratsy. Diso ny filazana fa sarotra ny manao sandoka amin’ity vola ity raha ity zava-nitranga tany Sambava ity. Tsy kely lalana ny ratsy ary mahita irika hamitahana olona.
Manana andraikitra ny mpitondra amin’ny fampahafantarana ny any ambanivohitra satria fanararaotan’ny olon-dratsy izao fotoana voalohany hanapariahana ireo vola ireo izao. Mailo ny olona ary maro ny tsy mety mandray ireo vola vaovao eto an-dRenivohitra. Mety hanimba ny tsenan’ny vola ny fisian’ny tranga tahaka izao.